Portofolio 10 an-tserasera momba ny mpamolavola tranonkala, ny mpamorona ary maro hafa | Famoronana an-tserasera
Lua louro | | Famolavolana tranonkala, Inspiration
Angamba mety ianao havaozy ny portfolio-tserasera fa tsy tena fantatrao izay hitifirana. Angamba tsy fantatrao izay "mandeha" amin'ny famolavolana tranonkala, na te hahita tranonkala hafa voaomana tsara ianao hipoitra hevitra. Na inona na inona toe-javatra misy anao dia mety tianao ity lahatsoratra ity.
Ireto ambany ireto dia nisafidy 10 izahay portfolio'ny matihanina amin'ny Internet amin'ny famolavolana tranonkala iraisampirenena mba hahitanao fa, na aiza na aiza misy anao, dia misy karazan-doko sy endrika tsy hita maso iraisan'ny rehetra. Jereo izy ireo ary omeo hevitra.
1 Teny lakile 4 amin'ny portfolio-tserasera ankehitriny
2 Portigio 10 an-tserasera
Teny lakile 4 amin'ny portfolio-tserasera ankehitriny
hetsika: gifs ho fiaviana avy amin'ny faritra sasany amin'ny tranokalanao, ny sary izay mivezivezy rehefa mamakivaky ilay pejy ianao ... Tsy lamaody ny statika.
ny fiasa izany: fivezivezena tsara ary intuitive. Ny mpitsidika anao dia tsy manadino na inona na inona.
Adaptability: efa mieritreritra ny maha-zava-dehibe ny fitaovana finday ho toy ny fanohanana mijery tranonkala iray izahay. Mahaliana, sary masina mahazatra ny fizahana amin'ny efijery kely dia tafiditra ao amin'ny fizahana amin'ny écran lehibe koa.
Vokatra paralaks: angamba ny lamaody mandalo indrindra, izay lazaiko fa tsy haharitra. Mampiavaka kokoa ny fikarohana sy fanandramana miaraka amin'ireo kaody "vaovao" (HTML5, CSS3 ...), ity vokatra ity dia ny famoronana ny fiheverana ny lalina amin'ny famolavolana tranonkala.
Portigio 10 an-tserasera
Mpanamboatra sy mpamorona fifandraisana
Mpamorona UI sy UX
Mpamorona fifandraisana. Raha miditra amin'ny tranonkalany ianao dia ho hitanao fa ny eo ambanin'ny pejy lehibe dia mifandimby ny sary mihetsika. Manova fiaramanidina amin'ny hafainganam-pandeha izy ireo, raha ny fanandramako dia tsy mahazo aina izy io. Hevitra tsara angamba raha miadana ny fotoana.
Mpamorona Vao 22 taona monja izy dia mampiseho firafitra miavaka.
Mpamorona UI. Ao amin'ity tranonkala ity, ny fahasoavana dia ireo sary mihetsika. Araka ny hitanao dia manjaka ilay "famolavolana fisaka" fanta-daza.
Mpamorona tranonkala zokiny. Mora jerena sy portfolio ahazoana aina.
Mpanamboatra farany. Tiako ny fikafika an'ity tranonkala ity: ny fitambaran'ny sary sy ny typography.
Mpamolavola sy mpamorona tranonkala. Tsy tiako ny vokatry ny sary famantarana sy ny sary famantarana ny haino aman-jery sosialy. Na izany aza, mametraka fitetezana sy firafitra hafa izy: rehefa mihodina, mizara roa ny pejy ary afindra amin'ny ilany ankavanan'ny pejy ny atiny.
Industrial, vokatra, UI ary mpamorona UX. Tsy haiko izay an'ity tranonkala ity, manasa ahy hanohy hitety azy io.
Masoivoho nomerika. Gifs izay mihetsika rehefa mihodina isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Portofolio 10 an'ny matihanina amin'ny famolavolana tranonkala